Global Voices teny Malagasy » Mila ny fanohananao ny mpikatroka Tailandey voasambotra taorian’ny #IAL2010! · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Septambra 2010 17:49 GMT 1	 · Mpanoratra Renata Avila Nandika miora
Sokajy: Thailandy, Fahalalahàna miteny
Voasambotra tao amin'ny Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena tao Bangkok Suvarnabhumi  i Chiranuch Premchaiporn, mpitantana ny Prachatai.
Niverina avy tany amin'ny Dinidinika “Aterineto ao amin'ny Fahalalahana 2010: Ny Fampanantenana sy ny loza mety hihatra amin'ny Fahalalahana Miteny ” natao tany Bodapesta ny mpanao gazety sy mpanohitra ny fanivanana iray (@Jiew  ao amin'ny twitter).
Mitondra loharanom-baovao manan-danja ho an'i Thailand izy, firenena izay fantatra amin'ny fitomboan'ny fanivanana ny aterineto, tahaka ny notaterin'ny OpenNet , ny fanimbazimbana ny zon'olombelona sy ireo fihetsika manohitra ny fahalalahana miteny . Nanaraka sy nanamarika  fisamborana maro an'ireo mafana fo niomerika avy any Thailand ny Feo Voarahona, anisan'izany ny fisamborana an'i Chiranuch teo aloha tamin'ny taona 2009-2010 .
Raha te-hahalala bebe kokoa mikasika ny tetikasany dia tsidiho ny Demokrasia Nomerikany . Raha te-hanohana azy ianao dia iangaviana hitsidika ity vohikala ity  sy hanohana ara-bola amin'ny tranga manjo azy. Afaka mitoraka tweet ihany koa ianao ao amin'ny “Help free @Jiew #freejiew #Thailand (Ampio maimaim-poana i @Jiew #freejiew #Thailand) ”.
Efa voasambotra  i Chiranuch Premchaiporn teo aloha, tamin'ny 6 Martsa noho ny Fandikan-dalàna amin'ny Solo saina any Thailand . Ny fiampangana azy tamin'izany dia ny famelany ireo tsikera apetraky ny mpamaky ny dinika ady hevitry Prachatai ao amin'ny aterineto  voalaza ho *lèse majesté* [fanivaivana ny mpanjaka] . Ny 31 Martsa 2010, navoaka i Chiranuch Premchaiporn ary nandoa antoka (300,000 baht tsy maintsy naloa).
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/09/26/9400/
 Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena tao Bangkok Suvarnabhumi: http://www.bangkokairportonline.com/
 “Aterineto ao amin'ny Fahalalahana 2010: Ny Fampanantenana sy ny loza mety hihatra amin'ny Fahalalahana Miteny: http://sites.google.com/a/pressatgoogle.com/internet-at-liberty-2010/
 tahaka ny notaterin'ny OpenNet: http://opennet.net/research/profiles/thailand
 sy ireo fihetsika manohitra ny fahalalahana miteny: https://advocacy.globalvoicesonline.org/2010/06/18/thailand-government-shuts-43000-more-websites-for-lese-majeste-plans-to-block-3000-more-total-up-to-113000/
 Nanaraka sy nanamarika: https://threatened.globalvoicesonline.org/bloggers/thailand
 fisamborana an'i Chiranuch teo aloha tamin'ny taona 2009-2010: http://thaipoliticalprisoners.wordpress.com/pendingcases/chiranuch-premchaiporn/
 Demokrasia Nomerikany: http://digital-democracy.org/2009/11/09/ddtv-episode-7-prachatai/
 hitsidika ity vohikala ity: http://freejiew.blogspot.com/
 Fandikan-dalàna amin'ny Solo saina any Thailand: https://advocacy.globalvoicesonline.org/wp-content/downloads/Act_on_Computer_Crime_2550(2007).pdf
 tsikera apetraky ny mpamaky ny dinika ady hevitry Prachatai ao amin'ny aterineto: http://www.prachatai.com/english/news.php?id=1035